निषेधाज्ञाको पालना भए पनि केही आपराधिक तत्त्वहरूका कारण भड्काउ भयो: एसपी पाण्डे
बलिराम यादव , २०७८ जेठ १९, बुधबार,०२:०४:PM
प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बेलबहादुर पाण्डे गएको माघ महिनादेखि पर्साको प्रहरी प्रमुखको कार्यभार समालेका छन् । उनी पर्सामा आएको झन्डै ५ महिना हुन लाग्यो । यो अवधिमा उनले कैद सजाय भई फरार रहेकालाई पक्राउ गरी कानुन मिचेर अवैध काम गर्ने देखी हुन्डी कारोबारमा संलग्नलाई कानुनी दण्ड दिलाउन सफल भएका छन् । एसपी पाण्डेको यी कार्यहरूबाट हालसम्म सरकारलाई ६ करोड ८८ लाखभन्दा बढी राजश्व सङ्कलनमा टेवा पुगेको छ । उनी आएको माघ महिनामा मात्रै एक करोड ८६ लाख भन्दा बढी राजश्व सङ्कलन भएको थियो । जसमा सवारी साधन कारबाहीबाट रु. १ करोड ६० लाख, अवैध विद्युतीय सामानबाट रु. एक लाखभन्दा बढी, पार्टपुर्जाबाट रु. ढाई लाख, लत्ताकपडाबाट रु. ५ लाख भन्दा बढी, किराना तथा खाद्यान्नबाट रु. १० लाख ४६ हजार र अन्यबाट ६ लाख ५७ हजार राजश्व सङ्कलन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
यस्तै फागुन महिनामा एक करोड ३२ लाखभन्दा बढी राजश्व उठेको थियो । जसमा सवारी साधन कारबाहीबाट रु. ८९ लाख भन्दा बढी, अवैध पार्टपुर्जाबाट रु. दुइ लाख पचहत्तर हजार, लत्ताकपडाबाट रु. १६ लाख, किराना तथा खाद्यान्नबाट रु. चार लाख पचहत्तर र अन्यबाट रु. १९ लाख ३१ हजार राजश्व सङ्कलन भएको थियो । यसैगरी, चैत महिनामा एक करोड १२ लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ । जसमा अवैध मरीचबाट रु. ९२ हजार, सवारी साधन कारबाहीबाट रु. ६४ लाखभन्दा बढी, अवैध लत्ताकपडाबाट रु. ३२ लाख, र किराना तथा खाद्यान्नबाट रु १४ लाख ४७ हजार भन्दा बढी राजश्व सङ्कलन भएको छ । त्यसतै, बैशाख महिनामा ६६ लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ । सवारी साधन कारबाहीबाट करिब रु. पौने ४७ लाख, अवैध विद्युतीय समानबाट रु. ३ लाखभन्दा बढी, पार्टपुर्जाबाट रु. पौने २ लाख, लत्ताकपडाबाट रु. १४ लाख ८३ हजार र किराना तथा खाद्यान्नबाट रु. एक लाख २३ हजार राजश्व सङ्कलन भएको थियो ।
यसैगरी, हुन्डी कारोबार रोकावटबाट रु. एक करोड ७७ लाख नेपाली र ५ लाखभन्दा बढी भारती रुपैयाँ बरामद भएको छ । यो चार महिनाको अवधिमा सवारी साधन कारबाहीबाट जम्मा रु. ३ करोड ६० लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ । यस्तै अवैध विद्युतीय समानबाट जम्मा रु. ३ लाख ६० हजार, पार्टपुर्जाबाट जम्मा रु. ७ लाख, लत्ताकपडाबाट जम्मा रु. ६८ लाख, किराना तथा खाद्यान्नबाट ३० लाख र अन्यबाट जम्मा रु. २५ लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ ।
पर्सामा निषेधाज्ञा चलिरहँदा प्रहरी र आम नागरिक बिच दुरी पनि बढेको छ । हालाकी पर्सा प्रहरीको सक्रियताले कोरोना संक्रमणको दर अहिले घटेको भए पनि केही ठाउँ प्रहरीबाट जनतामाथि अभद्र व्यवहार हुनु र जनताबाट प्रहरीबाट पनि नागरिकमाथि दुर्व्यबहारको घटनाले ‘प्रहरी मेरो साथी’ भन्ने अभियानमा पनि असर पर्न थालेको आम नागरिकको बुझाई छ । निषेधाज्ञा चलिरहेको पर्सामा आम नागरिक र प्रहरी बिचको सम्बन्ध तथा कोरोना संक्रमणको अवस्था बारे पर्साका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पाण्डेसंग गोठालो खबरको लागि बलिराम यादवले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
प्रश्न:- सर्वप्रथम यहाँलाई धन्यावाद, अहिले संक्रमण दर घटिरहेको छ, यसको श्रेय कसलाई दिनुहुन्छ ?
एसपी पाण्डे: यसमा राज्यपक्ष, सरोकारपक्ष र सबै आमसमुदायको प्रयासबाट अलि छिटो नै काहाली लाग्दो कोरोनाको संक्रमणबाट फिर्ता हुँदै छौं । कोरोना संक्रमणको डाटा र यसले पु¥याएको क्षति दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ । यो सुखद विषय हो ।
प्रश्न:- निषेधाज्ञा चलिरहँदा प्रहरीलाई कस्तो चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ ?
एसपी पाण्डे: कोरोना महामारीको संक्रमणबाट यस जिल्लावासी नागरिकहरुको सुरक्षा गर्ने, निषेधाज्ञाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई नै थियो । यसमा हामीसंग उपलब्ध भएको स्रोत/साधन, जनशक्ति अधिकतम प्रयोग गरी कार्यान्वयनमा लाग्यौं । निषेधाज्ञा निरन्तर रूपमा हप्ता-हप्तामा थप्दै गयौँ, अनि मानिसको पेसा व्यवसाय चौपट भयो । सामान्य मानिस पनि प्रभावित भए जसले गर्दा पछिल्लो समयमा अलिकति निषेधाज्ञा उलङ्घन पनि भयो र यसलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा केही चार/पाँच वटा घटनाहरू घटे र त्यसलाई पनि हामीले कानुनको दायरामा ल्यायौं। अहिले निषेधाज्ञा कार्यान्वयनकै फेजमा छ ।
प्रश्न:- प्रहरीको सक्रियताले कोरोनाको संक्रमण दर घट्यो तर पनि प्रहरीको आलोचना कम भएको छैन ? किन ?
एसपी पाण्डे: निषेधाज्ञाको अवधिमा मान्छेलाई घरबाट बाहिर ननिस्किन भन्ने आदेश छ । कुनै पनि किसिमको क्रियाकलापमा सहभागी हनु नपाउने भन्ने पनि आदेश छ । यो सजिलो विषय होइन र त्यो पनि केही दिनको लागि मात्रै भनाई, एक महिनाभन्दा बढी भयो । यसमा जनमानसमा एक किसिमको आक्रामकता थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही खालका सम्झौता समेत गर्नु पर्ने भयो । यसलाई म अन्यथा लिँदैन । किन भने यो एउटा यस्तो रोग हो जसका कारण एक दिन मात्रै होइन, महिनौँ दिनसम्म निषेधाज्ञा लगायौँ । त्यसको केही दिन असर प्रमाव त देखिन्छ नि । म त्यस्तै रूपमा लिएको छु ।
प्रश्न:- निषेधाज्ञा संगै प्रहरी र जनताको दुरी बढेको छ, यसले ‘प्रहरी मेरो साथी’ भन्ने अभियानलाई फरक पार्छ कि पार्दैन ?
एसपी पाण्डे: फरक पार्दैन, किनभने हामीले निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गराउने पर्छ । जनतालाई पनि यो कुरा थाहै छ । सबै पक्ष, समूह, तप्कालाई यो जनाकारी नै छ । कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह, राजनीति वा कुनै खालको भेदभावनगरी जनताको हितका लागि, कोभिडको रोगबाट पार पाउनको लागि, मुक्ति पाउनको लागि राज्यको तर्फबाट गरिएको कानुन बमोजिमको निर्णय हो । त्यस कारण यसमा प्रहरीसंग दुरी बढ्यो भन्दा पनि निषेधाज्ञाले गर्दा मानिसको जुन जनजीवन र क्रियाकलाप प्रभावित भयो, त्यसको छिटपुट असर र प्रभाव रहिरहन्छ नै । त्यसलाई हामीले स्वाभाविक पनि मानेका छौँ । जनतासंग दुरी भन्दा पनि सबैलाई जानकारी नै छ कि हामीलाई कार्यान्वयनमा जानु पर्ने थियो र केही छिटपुट घटना हुन्छ । त्यसलाई स्वीकार्नु नै पर्छ ।
प्रश्न:- अन्य दिनको तुलनामा प्रहरीको कुरता देखिएको छ र सर्वसाधारणले प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने काम पनि गरेका छन् ? यसमा कहाँनिर कसको चुक भयो ?
एसपी पाण्डे: पछिल्लो समय एकैदिन प्रहरीविरुद्ध ४ वटा घटना भएको छ । त्यसको भोलिपल्ट नै एउटा घटना गरी ५ वटा घटना भएको छ । त्यो आपराधिक खालको मान्छु। किनभने त्यहाँ प्रहरीका कारण समस्या भएको होइन । निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा निषेधाज्ञा उलंगन गरी पेसा व्यवसाय भिडभाड गर्ने काम गरे । त्यसलाई रोक्ने क्रममा प्रहरीमाथि नै आक्रमण भएको विषय थियो । अहिलेको समयमा सबैको हातमा मोबाईल भएको हुनाले फोटो खिच्ने, भिडियो बनाउने कामले पनि अझै भड्काउने कार्य भयो । त्यस घटनामा जो जो संलग्न थिए त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुन बमोजिम कारबाहीमा ल्याएका छौं । मुडलिमा प्रहरी विरुद्ध भएको घटना नितान्त आपराधिक घटना हो । प्रहरीमाथि किन यसरी आक्रमण भयो भन्दा २०६३ पछिको नागरिकता प्राप्तगरेका व्यक्तिहरू जसको नेपाली नागरिकता छ तर घर भने छैन ।अन्यथा सामान्य नागरिक हुनुहुन्छ वहाँहरूले यसको पालना गर्नु भएको छ, बुझ्नु पनि भएको छ र प्रहरीको ड्युटी पनि बुझ्नु भएको छ र सपोर्ट पनि छ । निषेधाज्ञाको पालना पनि भएको छ । समाजमा केही आपराधिक तत्त्वहरू हुन्छन् । जसले कानुन उलङ्घन गर्छन् र त्यसतालाई कानुन बमोजिम नै हामीले निरूपण गर्छौ । यसको तरिका पनि यही नै हो ।
प्रश्न:- प्रहरीलाई दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिहरु लगभग १६ जनालाई मुद्दा चलाइएको छ । यसमा नागरिकमाथि दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरीहरु चाहिं कति जनालाई कारबाही गर्नु भयो ?
एसपी पाण्डे: प्रहरीविरुद्ध जुन आक्रमण, हमला, दुर्व्यवहार भएको छ । यसमा हामीले विभिन्न ४/५ वटा मुद्दा लगाएर कानुनी प्रक्रियामा लगेका छौँ र केही मानिसहरू पक्राउ गर्नु पर्ने बाँकी छ । अर्को यहाँले सङ्केत गरेको जुन भिडियो भाइरल भएको छ । त्यसमा सर्जिकल पसलमा काम गर्ने कर्मचारीमाथि कुटपिट भएको काम गलत हो । प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट आवश्यक छानबिन भइरहेकोले त्यसबारेमा यो भन्दा बढी बोल्न आवश्यक ठान्दिन ।
प्रश्न:- प्रदेश प्रहरीले डिएसपीको छानबिन गर्न प्रदेश प्रहरी टोली पठाएको छ। त्यस सम्बन्धमा के भइरहेको छ ?
एसपी पाण्डे: यस सम्बन्धमा एकजना एसपी साहेबको नेतृत्वमा छानबिन गर्ने समिति गठन भएको छ । त्यसले आफ्नो काम गरिरहेको छ । यसमा प्रहरीको तर्फबाट आवश्यकताभन्दा बढी हर्कत भयो कि भन्दिने हो, त्यो प्रहरीको तर्फबाट कानुन विपरीत गलत हिसाबले भयो भनेर भन्दा पनि अनावश्यक हिसाबले त्यहाँ अलिकति हर्कत भयो भन्ने रूपमा लिइएको भने सही हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
प्रश्न:- निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि सीमा क्षेत्रमा तस्करीको काम नरोकिएको भन्ने गुनासोहरू आउन थालेको छ ? खास कुरा के रहेको छ ?
एसपी पाण्डे: यतिबेला पनि गुनासाहरू छन् भने सबुत प्रमाण तथ्यसहित आएको खण्डमा स्वीकार गर्छौ । अन्यथा हामीले सीमामा कडाईका साथ निगरानी गरेका छौं र मलाई लाग्छ अहिले सबैभन्दा कम चुहावट भएको छ । केही मान्छेको पेसा व्यवसाय नै त्यही हो, अनुकूल हुने बित्तिकै बदमासी गर्छन् । यतिबेला धेरै नियन्त्रण भएको छ भने लाग्छ । छिटपुट केही भएको हुन सक्छ । त्यसको बारेमा सूचना प्राप्त वा तथ्य आयो भने त्यसमा हामी तत्काल प्रकृया अगाढी बढाउँछौं ।
तसर्थः तस्करी मौलायो भने पक्षमा म छैन । निषेधाज्ञामा त झन् सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी कडाइका साथ तैनाथ छन् । धेरै नजिक नजिकमा युनिटहरू पनि छन् । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द भएको हुनाले ईनार्वा नाका बाहेक अन्य नाकाबाट मानिस मोमेन्ट गर्न नपाइने भएकाले र दुबै सङ्गठनको चुस्त निगरानी रहेका कारणले यतिबेला बढी कडाइमा सीमा नाका रहेको छ । यो अवधिमा निषेधाज्ञा उलङ्घन गर्ने सवारी साधनलाई कारबाही पनि गरेका छौं र केही समानहरू बरामद भएकोले त्यसलाई वीरगंज भन्सार कार्यालयमा पनि पठाएका छौं, जुन कुरा प्रेस विज्ञप्ती मार्फत जानकारी पनि गराएका छौं ।
यो बिचमा ठुल–ठुला हुण्डीको कारोबार गर्नेलाई पनि पक्राउ गरेका छौ । एउटा करिब ८३ लाख र अर्को ५३ लाख बराबरको अवैध हुण्डी कारोबार गर्ने मानिससहित पक्राउ गरेका छौं ।
प्रश्न:- लागूऔषध र हुण्डी कारोबार जस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा युवाहरूकै बढी संलग्नता हुनुको कारण के होला ?
एसपी पाण्डे: आम्दनीको स्रोत दुई वटा हुन्छ, एउटा कानुनी अर्को गैर कानुनी । सही तरिकाले काम गर्दा आम्दानी हुने भए पनि कोही कोहीको ठुलो अपेक्षा पुरा हुँदैन । कम समयमै बढी पैसा कमाउने लोभ लालचमा केही युवाहरू गलत बाटोमा लाग्छन् । खुल्ला सीमाना र बोर्डर भएकोले लागु औषधको पनि उतिकै जोखिम छ ।
पछिल्लो समयमा मेरो अनुभव र तथ्याङ्कगत हिसाबले युवा पिंढी ठुलो संख्यामा लागूऔषधको दुर्व्यसनबाट र संगसंगै उनीहरूले आफ्नो दुर्व्यसन निरन्तर गर्ने हिसाबले लागूऔषध बिक्री वितरण ओसारपसार भएको डाटाले देखाएको छ । यो बडो चिन्ताजनक छ । यसमा मैले यति नै भने ।
सीमामा तस्करी वा पेसा व्यवसायीहरु जो पारी गएर कारोबार गर्छन्, त्यहाँ नेपाली रुपैयाँ चल्दैन । नेपालमा सटही काउन्टरहरू छन् । पारी जाँदा भारतीय रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँसंग साटेर कारोबार गर्छन् । सायद भारतमा त्यो सुविधा छैन जस्तो मलाई लाग्छ । कानुनी वा गैर कानुनी हिसाबले जुन पैसा छ, त्यो नेपाल आएर हुण्डी मार्फत कारोबार भएको देखिएको छ । मैले जिम्वेवारी समालेदेखी लगभग ८/९ वटा त्यस्तो केस बरामद गरी मुद्दा पक्रियामा लगेको छु । यो प्रकारको अपराध नियन्त्रण गर्ने कार्यमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौं र यसले यो अपराध न्यूनीकरण गर्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ जस्तो लाग्छ
प्रश्न:- अन्त्यमा के भन्न चाहनु हुन्छ ?
एसपी पाण्डे: कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पर्सा जिल्लामा लागेको निषेधाज्ञाको सबैले पालना गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु । जति इमान्दारीपुर्वक पालना गरियो उति नै चाँडो संक्रमण घटेर जान्छ र हामी सबै सामान्य जीवनमा फर्कन्छौ । कुनै पनि सिमानाकामा हुने अपराध वा अन्य कुनै अपराधको बारेमा सूचना, नैतिक समर्थनको हिसाबले तत्काल प्रहरीलाई जानकारी गराउनसमेत अनुरोध गर्दछु ।